१ सय ९६ देशमा दौडिएर विश्व कीर्तिमान ! – " सुलभ खबर "
१ सय ९६ देशमा दौडिएर विश्व कीर्तिमान !
एजेन्सी । धरै मानिसले आफ्नो विभिन्न क्षमता र विलक्षण प्रतिभा देखाई विश्व कीर्तिमान कायम गरेका छन् । तीमध्ये बेलायतका एक व्यक्तिले विश्वका १ सय ९६ वटा देशमा म्याराथन दौडिएर विश्व कीर्तिमान बनाएका छन् ।
बेलायतको ब्रिस्टल सहरका निक बटर नामक यी ब्यक्तिले विश्वका १ सय ९६ वटा देशमा म्याराथन दौडिएर विश्व कीर्तिमान कायम गरेका छन् । अहिलेसम्म यतिधेरै देशमा म्याराथन दौडमा भाग लिएका निक बटर मात्रै हुन् । ३० वर्षका निकले म्याराथन आफ्नो १ सय ९६ औं देशका रुपमा ग्रिसको एथेन्सलाई बनाए ।
हरेक देशमा २६ दशमलव २ माइल दौडिएका उनले गत वर्षको जनवरीदेखि आफ्नो विश्वव्यापी म्याराथन सुरु गरेका थिए । क्यानडाबाट म्याराथन सुरु गरेका उनलाई १ सय ९६ देश पूरा गर्न ६ सय ७४ दिन लागेको थियो ।
म्याराथनका क्रममा उनले ५ हजार १ सय ३० माइलको दौड पूरा गरेका छन् । आफ्नो म्याराथनबाट करिव ३ करोड रकम संकलन गर्न सफल भएका उनको उक्त रकम क्यान्सरपीडितहरुका लागि दान गर्ने योजना छ । आफ्नो म्याराथन यात्रा निकै उतारचढावपूर्ण रहेको उनी सुनाउछन् ।